अमेरिकी सेनाले चीनमा कोरोना ल्याएकोे आरोप – Maitri News
अमेरिकी सेनाले चीनमा कोरोना ल्याएकोे आरोप
maitrinews March 13, 2020
चीन । चीनको विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले अमेरिकी सेनाले चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस ल्याएको हुनसक्ने बताएका छन्। बेइजिङबाट ग्याब्रियल क्रसलेले रोयटर्सका लागि लेखेको समाचारमा जनाइएअनुसार ती प्रवक्ताले वासिङटनसँग भाइरसलाई लिएर कडा शब्दमा वाक्युद्ध गरेका हुन्।
कडा शब्दमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानको प्रमाणित ट्विटर एकाउन्टमा अंग्रेजीमा गरिएको ट्विटमा अमेरिकाले पारदर्शिता नदेखाएको आरोप लगाइएको छ।
‘अमेरिका बिरामी शून्य अवस्थामा कहिलेदेखि थियो ? कति संक्रमित छन्, ती अस्पतालका नामहरु के हुन् ? सम्भवतः तिनै अमेरिकी सेना हुनसक्छन्, जसले वुहानमा कोरोनाभाइरस ल्याए।’, झाओले भनेका छन्, ‘पारदर्शी होऊ, तथ्यहरु सार्वजनिक गर, हामीलाई विस्तृत जानकारी चाहियो।’
Previous Previous post: वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द
Next Next post: विप्लव माओवादीले बाबु किरिया बसेका बेला किशोरी छोरी अपहरण